जि टिभिमाथिको आलोचना गलत भएको भन्दै ओलीले जनाए यस्तो कडा आपत्ति ! – Enepali Samchar
जि टिभिमाथिको आलोचना गलत भएको भन्दै ओलीले जनाए यस्तो कडा आपत्ति !
January 21, 2021 adminLeaveaComment on जि टिभिमाथिको आलोचना गलत भएको भन्दै ओलीले जनाए यस्तो कडा आपत्ति !
e nepaalisamchaar /माघ ८, काठमाडौं । भारतीय टेलिभिजन जि टिभीको विवादित भिडियो रिपोर्टबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख खोलेको छन् । उनले जि टिभिको भिडियो रिपोर्टमाथि गरिएको आलोचना व्यर्थ भएको बताए ।
उनले जि टिभिले एभरेष्टको नाउँबारे उठाएको प्रश्न जायज नै भएको पनि बताए ।
आफुँ पक्षीय प्रेस संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मैंले अस्ति एक विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिएँ, आलोचना गर्ने ठाउँ कहिँ भेटिएनछ, अनि त्यो पत्रकारले इण्डियामा गएर यो एभरेष्टका नाउँमा किन राखेको ? हाम्रो मान्छेले पहिलो पटक नापेको थियो भनेछ, हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो । के बोलेछ, यहाँ राष्टवादको बर्बण्डर मच्चियो ।’
उनले भिडियो रिपोर्टमा जि टिभीले सगरमाथा खान्छु नभनेको बताए । उनका अनुसार नेपालीहरु बेकारमा बहकिए । भिडियो रिपोर्टबारे बोल्दै उनले भने, ‘के उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र ? यति साह्रो बहकिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन् । वाइघातमा बहकिएर ।’
राष्ट्रवाद भनेको तामासा र नाटक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ‘राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा हो ? राष्ट्रवाद ड्रामा हो ? राष्ट्रको पक्षमा, स्वभिमानको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिने कुरा राष्ट्रवाद हो’, उनले भनेका छन् ।
सफल जिन्दगिको लागि प्रेरक लाइनहरु
चम्कियो बाबुरामको भाग्य , हुने भए दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री ! यस्तो बन्दैछ नयाँ सत्ता समीकरण